Waqtiga ay Barcelona iyo Juventus dhammeystirayaan heshiiska is dhaafsiga ee Arthur & Pjanic oo la shaaciyay – Gool FM
(Turin) 25 Juun 2020. Waxaa ugu dambeyn soo dhowaaday in uu guuleysto damacii Juventus ee ahaa inay Barcelona Miralem Pjanic kaga baddeshaan Arthur Melo, waxaana joornaaliistaha Sky Sports Italia ee Gianluca DiMarzio laga soo xiganayaa in heshiiskaas la soo gabagabeyn doono labada maalmood ee soo aaddan.
Arthur oo lagu tilmaamo inuu yahay Xavi-ga cusub ayaa ku adkeystay inuu Barca la sii joogo, balse Juve ayaa waddo walba u martay inay ka dhaadhiciyaan inay la soo saxiixdaan.
Gianluca DiMarzio ayaa boggiisa rasmiga ah ku soo qoray inay labada koox ay 48-da saacadood ee soo aaddan ay dhameystiri doonaan heshiiska is weedaarsiga ciyaartoyda ah.
Dhanka kale, waxay wararku sheegayaan in Barcelona ay 60 milyan oo euro ay ku bixin doonaan soo qaadashada Pjanic, halka Juve iyaduna ay bixin doonto 70 milyan euro ka hor 30-ka bisha Juun, sida Mundo Deportivo ay sheegeyso.
Maalmaha soo aaddan ayaa la filayaa inay labada koox si rasmi ah ugu dhowaaqaan heshiiska ay isku weedaarsanayaan Pjanic iyo Arthur.